Mthubi oMthubi oPhucukileyo omnye wabantwana abaNtombazana beNdadi yokuqubha |
Zonke iimpahla zethu zokuqubha zamantombazana zenziwe ngelaphu ekumgangatho ophezulu kwaye zibekwe ngaphambili nangasemva Zonke iiprinta zethu ziyafumaneka kwimizimba emininzi amaxesha amaninzi nge-1-PC okanye i-2-PC yokukhetha iisuti zokuqubha zilungile kubantu abadada ngokungaqhelekanga. Iyafumaneka kubo bonke ubungakanani bamantombazana 2 thru 14 ke oodade banokubetha indawo yaselwandle njengeqela Jonga uninzi lwethu lokulungelelanisa iibhodi kunye neerashards ukwenza iseti enkulu!
Ubungakanani Isifuba Isinqe Cebisa ubude
U-L 54-64CM 52-62CM 110-130CM
XL Ngama-58-68CM Ngama-56-66CM 125-140CM
I-XXXL Ngama-66-76CM 64-74CM 150-160CM
Imilinganiselo yesandla iya kuba ne-2-3cm ngokwahluka.
Imibala emihle, isuti entle, ilungile. QAPHELA: Emva kokuphonononga izimvo ezifanelekileyo ezinxulumene nolu phawu, ndayalela ubungakanani ukusuka kubungakanani obuqhelekileyo, kwaye buhambelana kakuhle (bukhululekile kancinci). Qaphela ukuba umntu oyinxibileyo ulungile.
Le yeyona suti ibalaseleyo yokubhukuda esakha sayifumana. Imibala ikhanya ngakumbi kunokuba isemfanekisweni. Ukulunga kukwagqibelele kwaye kungangqinelani kakhulu okanye kuncinci kwaphela.
Egqithileyo I-UPF50 + Ukuphefumla okungangenisi manzi ehlotyeni
Okulandelayo: I-100% yeNylon eprintiweyo yokuTsala iMens Shorts Shorts yeebhulukhwe ezimfutshane zebhodi